News - Redispersible Latex အမှုန့်အသုံးပြုခြင်း
Redispersible အမှုန့်သည်အမှုန့်ခြောက်သောပိုလီမာ emulsion ကိုခြောက်သွေ့သောအမှုန့်ရာဘာဟုခေါ်သည်။ ဒီအမှုန့်ကိုရေနှင့်ထိတွေ့ပြီးနောက်အလျင်အမြန် emulsion မှလျှော့ချနိုင်သည်နှင့်မူရင်း emulsion ကဲ့သို့တူညီသောဂုဏ်သတ္တိများကိုထိန်းသိမ်းထားသည်, ဆိုလိုသည်မှာရေကိုအငွေ့ပျံပြီးနောက်ရုပ်ရှင်ဖြစ်ပေါ်လိမ့်မည်။ ဤရုပ်ရှင်သည်မြင့်မားသောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိခြင်း၊ ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်ခြင်းနှင့်အလွှာအမျိုးမျိုးကိုကောင်းစွာခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ မြင့်မားသောနှောင်ကြိုးလိုင်း။
Redispersible Latex အမှုန့်ကိုဆောက်လုပ်ရေးနယ်ပယ်များတွင်အဓိကအားဖြင့်ပြင်ပနံရံကပ်ကပ်ခြင်း၊ ကြွေပြားကပ်ခြင်း၊ မျက်နှာပြင်ကုသခြင်း၊ ပေါင်းစပ်ခြင်း၊ Gypsum၊ stucco gypsum၊ အတွင်းပိုင်းနှင့်အပြင်နံရံပတ်ပတ်လည်တွင်ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ အလှဆင်မော်တာများအသုံးပြုသည်။ အလားအလာများ
redispersible latex အမှုန့်ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းသည်ရိုးရာဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုများစွာမြင့်တက်စေပြီး၊ ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများထုတ်ကုန်များ၏စသည်ဖြင့်ပေါင်းစည်းညီညွတ်မှု၊ ပေါင်းစည်းညီညွတ်မှု၊ flexural ခိုင်မာမှု၊ သက်ရောက်မှုခံနိုင်ရည်၊ ဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းများ၏အရည်အသွေးကိုသေချာစေရန်မြင့်မားသောအရည်အသွေးနှင့်အဆင့်မြင့်နည်းပညာဖြင့်ဆောက်လုပ်ရေးထုတ်ကုန်များကိုပြုလုပ်ပါ။
လက်ရှိတွင်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ကျယ်ပြန့်စွာ အသုံးပြု၍ ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည့်ပိုလီမာမှုန်များသည် Vinyl Acetate Polyvinyl Acetate (VAC / E)၊ Ethylene of Terpolymer, Vinyl Chloride နှင့် Vinyl Laurate (E / VC / VL), Vinyl Acetate Ester နှင့် Ethylene နှင့်ပိုမိုမြင့်မားသော fatty acid vinyl ester ternary ဖြစ်သည်။ copolymer ရာဘာအမှုန့် (VAC / E / VeoVa)၊ ဤပြန်လည်ပြုပြင်ထားသောပေါ်လီမာအမှုန့်သုံးမျိုးသည်စျေးကွက်ကိုလွှမ်းမိုးသည်။ အမှုန့်။ မော်တာများပြုပြင်ထားသောပိုလီမာများကိုအသုံးပြုခြင်း၏နည်းပညာဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံအရ၎င်းသည်အကောင်းဆုံးနည်းပညာဆိုင်ရာဖြေရှင်းချက်ဖြစ်နေဆဲပင်။
၃။ ၎င်းသည်အင်္ဂတေမှလိုအပ်သောလက်တွေ့သွင်ပြင်လက္ခဏာများနှင့်ကိုက်ညီနိုင်သည် (ဆိုလိုသည်မှာလိုအပ်သောလုပ်ဆောင်နိုင်မှု)၊
4. အခြား monomers နှင့်အတူပိုလီမာမာစေးသည်အော်ဂဲနစ်မတည်ငြိမ်သောဒြပ်ထု (VOC) နှင့်အနိမ့်ကျသောဓာတ်ငွေ့၏ဝိသေသလက္ခဏာများရှိသည်။
၅။ ၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောခရမ်းလွန်ခုခံမှု၊ ကောင်းမွန်သောအပူခုခံမှုနှင့်ရေရှည်တည်ငြိမ်မှု၏ဝိသေသလက္ခဏာများရှိသည်။
saponification မှမြင့်မားသောခုခံနှင့်အတူ 6,
7, အကျယ်ဆုံးဖန်အကူးအပြောင်းအပူချိန်အကွာအဝေး (Tg) ရှိပါတယ်;
10. စွမ်းဆောင်ရည်၏အကာအကွယ် colloid (polyvinyl alcohol) နှင့်ပေါင်းစပ်ရန်လွယ်ကူသည်
ပုံ ၁ သည်စျေးကွက်အတွင်းပြန်လည်ရောင်းချသောအမှုန့်များပုံဖြစ်သည်
1. Redispersible အမှုန့်သည်ရေတွင်ပျော်ဝင်နေသော redispersible အမှုန့်ဖြစ်သည်။ ၄ င်းသည် Ethylene နှင့် vinyl acetate ၏ copolymer တစ်ခုဖြစ်ပြီး polyvinyl alcohol နှင့် protective colloid ဖြစ်သည်။
၂။ VAE redispersible latex အမှုန့်သည် film-property ပိုင်ဆိုင်မှုရှိသည်။ 50% aqueous solution သည် emulsion ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ၂၄ နာရီကြာဖန်ဖန်ပေါ်တွင်ထားပြီးနောက်ပလတ်စတစ်ကဲ့သို့သော film ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
၃။ ဖွဲ့စည်းထားသောရုပ်ရှင်သည်အချို့သောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိမှုနှင့်ရေခံနိုင်မှုတို့ရှိသည်။ အမျိုးသားအဆင့်စံချိန်စံညွှန်းများရောက်ရှိရန်နိုင်ပါတယ်။
၄။ ပြန်လည်သန့်စင်နိုင်သောအစေးအမှုန့်သည်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသည်။ ၎င်းသည်မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိပြီးထူးခြားသောစွမ်းဆောင်နိုင်မှု၊ ထူးခြားသောရေခံနိုင်မှု၊ ကောင်းမွန်သောနှောင်ကြိုးခိုင်ခံ့မှုနှင့်မော်တာမော်တာ၏အလွန်ကောင်းမွန်သောအယ်ကာလီခံနိုင်ရည်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ နှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း, ဒါကြောင့်အက်ကွဲခံနိုင်ရည်မော်တာအတွက်ပိုမိုအားကောင်းပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိပါတယ်။
ခြောက်သွေ့သောအမှုန့်မော်တာများတွင် redispersible စေးအမှုန့်ကိုအသုံးပြုခြင်း:
◆ပန်းရံအင်္ဂတေနှင့်အင်္ဂတေအင်္ဂတေ - ပြန်လည်ပြုပြင်ထားသောစေးကပ်မှုန့်သည်ကောင်းမွန်သောရေစိုခံနိုင်ခြင်းမရှိခြင်း၊ ရေထိန်းထားခြင်းနှင့်အေးခဲခြင်းခံနိုင်ရည်ရှိပြီးရိုးရာကျောက်မျက်မော်တာတွင်ရှိသောအက်ကွဲခြင်းနှင့်စိမ့်ဝင်ခြင်းများကိုထိရောက်စွာဖြေရှင်းနိုင်သည်။ နှင့်အခြားအရည်အသွေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ။
◆ကိုယ်ပိုင်-level မော်တာများနှင့်ကြမ်းပြင်ပစ္စည်း: Redispersible စေးအမှုန့်မြင့်မားတဲ့အစွမ်းသတ္တိကိုကောင်းသောစည်းလုံး, ကော်နှင့်လိုအပ်သောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိပါတယ်။ ဆေးကြောခြင်း၊ ပွန်းပဲ့ခြင်းခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းနှင့်ပစ္စည်းများကိုရေထိန်းထားခြင်းကိုတိုးတက်စေနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောလက်တွေ့ကျမှု၊ လုပ်ဆောင်နိုင်မှုနှင့်အကောင်းဆုံးမိမိကိုယ်မိမိချောမွေ့စေသည့်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုကြမ်းခင်းအဆင့်ညှိမော်တာနှင့်မျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ယူဆောင်စေနိုင်သည်။
◆ကြွေပြားကပ်ခြင်း၊ ကြွေပြားကပ်ညှိခြင်း - Redispersible latex အမှုန့်သည်ကောင်းမွန်သောစွဲကပ်မှု၊ ကောင်းမွန်သောရေထိန်းထားနိုင်မှု၊ ကြာရှည်စွာဖွင့်နိုင်မှု၊ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မှု၊ ၎င်းသည်မြင့်မားသောကော်၊ မြင့်မားသောစလစ်ခုခံနိုင်မှုနှင့်ကြွေပြားကပ်ကော်၊ ပါးလွှာသောကြွေပြားကပ်ကော်နှင့်ပူးတွဲဖြည့်စွက်ရန်ကောင်းမွန်သောစလစ်ဒဏ်ခံနိုင်မှုကိုဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်သည်။
proof ရေစိုခံမော်တာ: Redispersible latex အမှုန့်သည်အလွှာအားလုံး၏နှောင်ကြိုးခိုင်မာမှုကိုမြှင့်တင်ပေးသည်။ elastic modulus ကိုလျှော့ချသည်၊ ရေထိန်းထားမှုကိုတိုးစေသည်၊ ရေထိုးဖောက်မှုကိုလျှော့ချသည်။ ထုတ်ကုန်များကိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မြင့်မားစွာ၊ ၎င်းသည်ရေတွန်းလှန်မှုနှင့်ရေခုခံမှုလိုအပ်ချက်များနှင့်အတူတံဆိပ်ခတ်ခြင်းစနစ်၏ရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။
◆ပြင်ပနံရံကပ်ကာကွယ်ခြင်းအင်္ဂတေ - ပြင်ပနံရံအပြင်ဘက်တွင်ကာကွယ်ခြင်းစနစ်တွင်ပြန်လည်ပြုပြင်ထားသောသုတ်ဆေးမှုန့်သည်အင်္ဂတေ၏စည်းလုံးမှုကိုအားကောင်းစေပြီးစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကိုလျှော့ချစဉ် insulator တွင်လည်းရှာဖွေနိုင်သည်။ လိုအပ်သောလုပ်ဆောင်နိုင်မှု၊ flexural အားနှင့်ပြင်ပနံရံတွင်ကပ်ထားသောမော်တာပစ္စည်းများ၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မှုရရှိရန်သင်၏မော်တာထုတ်ကုန်များသည်လျှပ်ကာပစ္စည်းများနှင့်အခြေစိုက်စခန်းများဖြင့်ကောင်းမွန်သောနှောင်ကြိုးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၎င်းသည်သက်ရောက်မှုခုခံမှုနှင့်မျက်နှာပြင်အက်ကွဲမှုဒဏ်ကိုတိုးတက်စေရန်လည်းကူညီသည်။
◆မော်တာမော်တာကိုပြုပြင်: Redispersible latex အမှုန့်သည်လိုအပ်သောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မှု၊ ကျုံ့မှု၊ မြင့်မားသောစည်းလုံးမှု၊ သင့်လျော်သော flexural နှင့် tensile strength ရှိသည်။ ပြုပြင်မော်တာကိုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာမဟုတ်သောကွန်ကရစ်ပြုပြင်ခြင်းအတွက်အထက်ပါလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီအောင်ပြုလုပ်ပါ။
face Interface Mortar: Redispersible latex အမှုန့်ကိုရေစုပ်ယူခြင်း (သို့) ချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်ခြင်းကြောင့် interface မျက်နှာပြင်ကိုကပ်ရန်မလွယ်ကူသည့်ပြsolveနာကိုဖြေရှင်းရန်အတွက်စသည်တို့ကိုကွန်ကရစ်မျက်နှာပြင်၊ aerated ကွန်ကရစ်၊ ထုံးသဲအုတ်နှင့် fly ash အုတ်များကိုအဓိကအသုံးပြုရန်အသုံးပြုသည်။ နှင့်အင်္ဂတေအလွှာသည်ဗလာဖြစ်သည်။ စည်စသည်တို့ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကော်အားပိုမိုခိုင်မာစေသည်။ ပြိုလဲလွယ်ခြင်းနှင့်ရေခံနိုင်ခြင်းနှင့်အလွန်အေးခဲသော - အရည်ပျော်မှုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ၎င်းသည်ရိုးရှင်းသောလည်ပတ်ခြင်း၊
အတွင်းနံရံနှင့်အပြင်နံရံတွင်ရှိသော putty အမှုန့်၊ ကြွေပြားကပ်ကော်၊ tile ပူးတွဲပါ ၀ င်မှု၊ ခြောက်သွေ့မှုန့်မျက်နှာပြင်အေးဂျင့်၊ အပြင်နံရံ insulator တွင်လည်းမော်တာ၊ self-leveling မော်တာ၊ ပြုပြင်မော်တာ၊ အလှဆင်မော်တာ၊ ပြင်ပအပူ insulator တွင်လည်းရေစိုခံမော်တာ။ အင်္ဂတေများအားလုံးသည်ရိုးရာဘိလပ်မြေအင်္ဂတေများ၏လတ်ဆတ်မှုနှင့်မြင့်မားသော elastic modulus ကိုတိုးတက်စေရန်နှင့်သူတို့ကိုဘိလပ်မြေအင်္ဂတေများအတွင်းရှိအက်ကြောင်းများဖြစ်ပေါ်ခြင်းကိုခုခံနိုင်ခြင်းနှင့်နှောင့်နှေးစေရန်ပိုမိုကောင်းမွန်သောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မှုနှင့်ဆန့်နိုင်သည့်စွမ်းအင်မြင့်မားစေရန်အသုံးပြုသည်။ ပေါ်လီမာနှင့်မော်တာများသည်ကွန်ယက်ဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်အစဉ်အဆက်ပေါ်လီမာဖလင်သည်အဆက်မပြတ်ပေါ်ပေါက်သည်။ ၎င်းသည်စုစုပေါင်းအကြားနှောင်ကြိုးကိုခိုင်မာစေပြီးမော်တာရှိအပေါက်အချို့ကိုပိတ်စေသည်။ ထို့ကြောင့်မာကြောပြီးနောက်ပြုပြင်ထားသောမော်တာသည်ဘိလပ်မြေအင်္ဂတေထက်စွမ်းဆောင်ရည်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။ ကြီးစွာသောတိုးတက်မှုရှိခဲ့သည်။
post အချိန်: မတ်လ -18-2018